Mareykanka oo sheegay in ay duqeyn ka dhan ah Al-Shabaab ka geysteen magaalo xeebeedka Xaradheere - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaMareykanka oo sheegay in ay duqeyn ka dhan ah Al-Shabaab ka geysteen magaalo xeebeedka Xaradheere
Mareykanka oo sheegay in ay duqeyn ka dhan ah Al-Shabaab ka geysteen magaalo xeebeedka Xaradheere
October 14, 2018 Puntland Mirror Somalia 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Milatariga Mareykanka ee ku sugan Africa ayaa sheegay in ay qaadeen duqeyn ka dhan ah maleeshiyada Al-Shabaab oo ka dhacay magaalo xeebeedka Xaradheere ee gobolka Mudug.
Duqeynta ayaa dhacday 12 Oktoobar, iyada oo qiimeynta weerarka uu socdo.
“Waxaanu hadda baaraynaa natiijada duqeynta, taasoo lala eegtay maleeshiyo Al-Shabaab ah oo keliya.” Bayaan kasoo baxay Milatariga Mareykanka ayaa sidaa lagu yiri.
Nin kamid ah kuwii ka dambeeyay qaraxii Muqdisho oo toogasho lagu fuliyay iyada oo la xusayo sanadguuradii kowaad ee weerarka
Ciidamada Puntland oo Wasiirka Gaashaandhiga maamulka Somaliland u diiday in uu tago magaalada Baran
Garowe-(Puntland Mirror) Ciidamada Puntland ee kuu sugan gobolka Sanaag ayaa u diiday Wasiirka Gaashaandhiga maamulka Somailiand in uu tago magaalada Baran, sida ay sheegeen ilo-wareedyo madaxtooyada katirsan. Ilo-wareedyo madaxtooyada Puntland katirsan ayaa warsidaha Puntland Mirror [...]